Grater imifino - into elula kakhulu, kodwa ngaphandle kwalo Awukwazi ukwenza noma yikuphi ekhishini eyodwa. Naphezu inkimbinkimbi umklamo, okuyinto surface metal ngamazinyo akhethekile izimbobo, khetha grater akulula kangako kwansuku ukusetshenziswa ekhaya. Iqiniso ukuthi grater imifino beze izinhlobo ezahlukene, ngakho ngaphambi kokuthi uthenge, kufanele anqume yiphi injongo kuthengwa izinto ukupheka.
Ngokuvamile, khetha eyodwa noma olunye uhlobo iflothi kufanele kube ubukhulu namazinyo - ukunquma ukuthi amanani kufanele imibengo imifino, ngesisekelo salokhu, ukuthenga into ofanele kakhulu. Kodwa kumelwe kukhunjulwe ukuthi iflothi kukhona jikelele, efanelekayo zonke izinhlobo imikhiqizo ekhethekile, wajabulela ukulungiswa isidlo esithile. Ngokwesibonelo, a grater for izaqathe Korean imifino lisikiwe ngendlela ekhethekile - eside, amapuleti mncane abafana spaghetti. Yiqiniso, noma iyiphi enye imikhiqizo ukusetshenziswa ukudla, usike ngendlela kuyoba nzima, futhi akuzona zonke imifino ungakwazi nquma. Ngakho-ke grater for izaqathe Korean kubhekisela esenzakalweni esiyisimangaliso ukupheka izinto akhethekile ethengiswa ngokwehlukile.
grater volumetric imifino, kunalokho, siphathelene jikelele ekhishini izinto - ke yakhiwa eziningana (3, 4, 5) ngala serrations futhi apertures ezinobukhulu obuhlukahlukene, okuvumela ukuba ugaye imikhiqizo nganoma iyiphi indlela ukusebenza. Kuyaphawuleka ukuthi abakhiqizi abaningi ukukhiqiza iflothi voluminous ephelele Isitsha imikhiqizo oqoshiwe. Lokhu kunikeza inzuzo eyengeziwe - kuyilapho izilimo ukusika ngeke uhlakaze bacondze etindzaweni letehlukene, futhi ngemuva kokuphela inqubo kungenziwa ngobumnene uthele. Muva nje, athandwa kakhulu yemifino umsiki ne Imibhobho esemzimbeni replaceable. Leli lungiselelo kwenza nquma imifino nganoma iyiphi indlela - izinti, cubes noma chips. Ububi kuphela kwalesi slicers yemifino - izindwani ebukhali, ngakho lapho isidingo uqhubeke ngokuqaphela.
Lapho uthenga izinto ezinjalo umuzi njengomuzi grater imifino, ngokukhethekile kufanele kukhokhelwe impahla okuyindawo senziwa. Graters, ngokuvamile ekhiqizwa kusuka insimbi engagqwali noma plastic. Futhi kanye nezinye izinto libhekene amandla anele, nje kudingeka uhlole ukuthi bangabakaNkulunkulu izinga okusezingeni eliphezulu. Lokhu kubalulekile ngoba usebenza ebusweni iflothi kuyoba nabo ukudla - ngakhoke yekhwalithi ephansi ozokufunda kuzokusiza kungithinte impilo wonke amalungu omkhaya.
A qiniso eliyimpicabadala: grater imifino kufakwe ohlwini 25 izinto zokupheka, okuyinto ushintshe jikelele. Kube okusungulile okuphawulekayo-yalolucwaningo 40 kwekhulu XVI eFrance, okuyindawo zasakazekela kulo lonke izwe. Nakuba ukuvela kwalesi ekhishini izesekeli ishintshile izikhathi eziningana, isimiso wokusebenza nokwakhiwa azishintshile - elula futhi enokwethenjelwa. Futhi ngakho akekho processor ukudla noma kagesi yemifino umsiki akuyona kwaphoqa ongavamile ekhishini grater.
Bank "Europlan": ukubuyekezwa kanye ikheli
Yini lihlukile udla usawoti kosher. Isicelo usawoti kosher ekuphekeni